Goolhaye David De Gea Oo Hal Shuruud Ku Xidhay In Uu Qalinka Ku Duugo Qandaraas Cusub Iyo PSG Oo Sabab U Ah. - GOOL24.NET
Goolhaye David De Gea Oo Hal Shuruud Ku Xidhay In Uu Qalinka Ku Duugo Qandaraas Cusub Iyo PSG Oo Sabab U Ah.
November 28, 2018 Mahamoud Batalaale
Goolhayaha kooxda Manchester United ee David De Gea ayaa diyaar u ah in uu saxiixo heshiis cusub oo waqti dheer uu ku sii joogi doono Old Trafford laakiin waxa uu wataa hal shuruud oo ay marka hore tahay in ay fuliyaan maamulka Manchester United.
Jose Mourinho ayaa ku luuqeeyay amaanta David De Gea kadib markii uu daawaday gool badbaadintii layaabka lahayd ee uu De Gea kooxdiisa xaalad xun kaga badbaadiyay kulankii Champions League ee Young Boys wuxuuna Mourinho sheegay ” Waa ciyaartoy heer caalami ah, waa goolhayaha aduunka ugu fiican”.
Markii hore wargayska Manchester Evening News ayaa shaaciyay in goolhaye David De Gea uu diyaar u yahay in uu sii joogo Manchester United isla markaana uu saxiixi doono heshiis cusub taas oo meesha ka saari karta qorshihii PSG ay ku doonaysay in De Gea ay heshiis xor ah kula wareegto.
Laakiin wargayska Evening Starndard ayaa xaqiijiyay in David De Gea laftiisu uu la hadlay maamulka kooxdiisa Manchester Uited isla markaana uu ku war galiyay in uu diyaar u yahay in uu saxiixo heshiis cusub isaga oo sidoo kale u cadeeyay halka shuruud ee uu ka doonayo.
Waxaana warbixintan lagu sheegay in David De Gea uu doonayo in laga dhigo ciyaartoyda ugu mushaarka badan kooxdiisa Manchester United isaga oo doonaya in todobaadkii uu mushaar ahaan u qaato £300,000 kun oo gini.
Gudoomiye ku xigeenka Manchester United ee Ed Woodward ayaa ku qasban in uu aqbalo dalabka De Gea haddii uu doonayo in goolhayaha reer Spain uu qalinka ku duugo heshiiska cusub ee waqtiga dheer lala doonayay iyo haddi kale abuuri doonta ismari waa kale oo mustaqbalkiisa halis galin kara.
David De Gea ayaa shaki la’aan ah xidiga Manchester United ugu fiicnaa shantii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay isla markaana waxa uu wali muujinayaa in ceeb wayni soo gaadhi lahayd Mourinho haddii aanu wax badan ka asturayn.
Alexis Sanchez ayaa ah xidiga Man United ugu mushaarka qaalisan isaga oo todobaad kasta u diyaar gaarooba 500,000 kun oo gini waxaana ku soo xiga Pual Pogba oo isaga laftiisu doonaya in mushaarkiisa sare loo qaado.
Xaqiiqdii waxa uu De Gea doonayaa in uu Man United sii joogo laakiin waxa uu rabaa in mushaarkii la sheegay in PSG ay ku doonayso uu ka helo Man United si uu Old Trafford u sii joogi karo.
Si kastaba ha ahaatee, waxay hadda u muuqataa in kubbadu ay taalo dhinaca maamulka Manchester United si loo dhaqaajin karo qandaraas cusub oo uu De Gea u saxiixo kooxda Red Devils.